Ngihleli Phambili Kwakho ... | Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 11, 2009 NgeSonto, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
Ungakushintsha kanjani okuqukethwe kwakho uma umuntu ophequlula iwebhusayithi yakho bekukwelinye izwe? Isimo esihlukile? Idolobha elihlukile? Ngale komgwaqo? Esitolo sakho? Ungakhuluma nabo ngendlela ehlukile? Kumele!
IGeotargeting sekunesikhathi impela ikhona embonini yezentengiso eqondile. Ngisebenze nenkampani yokumaketha egciniwe ukuze ngisebenze kunkomba yokuphathelene esebenzisa isikhathi sokushayela nebanga ukukala amathemba futhi yaphumelela ngokumangazayo. Amabhizinisi awaqapheli ukuthi ukusondela kubaluleke kangakanani ebhizinisini lawo lansuku zonke.
Ngisebenza namakhasimende anezitolo ezingomakhelwane kodwa ngijabule ngokuthi angavotelwa kuqala emncintiswaneni ohlanganisa yonke indawo yedolobha elikhulu. Kuhle kakhulu - bazotholakalela ikota yesigidi sabantu okungenzeka ukuthi abasoze bangena esitolo sabo. Uma ngabe basebenze kanzima ukuqwashisa ngesitolo sabo ebangeni elingamakhilomitha ohlangothini ngalunye, kunganikeza imbuyiselo engcono kakhulu ekutshalweni kwemali.
Uhlobo lwakamuva lweFirefox empeleni luhlinzekela ukusetshenziswa kwe-geolocation yisiphequluli. Ngikuhlolile futhi ngokungagwegwesi angihlatshwanga umxhwele - ukunemba okusabekayo. Ngicabanga ukuthi kungani bengangenanga nje Idatha ye-GeoIP. IMozilla ikhombisile ukuthi bengiseChicago lapho empeleni ngiseNingizimu ye-Indianapolis:
Ukunemba eceleni, lokhu kuseyisinyathelo sendlela efanele. I-geoaccuracy ye-iPhone iguqule izinhlelo zokusebenza zeselula. I-Google Latitude ikhombisa okunye okungenzeka ukuthi kuyamangalisa.
Lokhu kuzoguqula iwebhu uma zonke iziphequluli zinikezela ngokunembile indawo yakho, noma kunjalo! Kusho ukuthi ngiyakwazi ukuguqula imininingwane ngamandla kwiwebhusayithi yami kuya ngendawo okuyo. Abantu abaningi basebenzisa i-GeoIP ukwenza lokhu, kepha ukufinyelela kwamahhala nesikhathi esinembile kungashintsha inkundla yokudlala.
Uma ngiyi-ejensi yezokumaketha, ngingakhuluma ngamakhasimende endawo ku- yakho egcekeni. Uma usegcekeni lami, ngingakushintsha ngamandla okuqukethwe engizokhuluma ngakho idolobha lethu. Uma ukwelinye izwe, nginganikeza imininingwane yehhovisi lesifunda. Uma ungezansi komgwaqo kusuka kimi, ngingaqhamuka ngokushesha okukhethekile ukukunikeza isisusa sokuma ngaphezulu.
Akunakuphikwa ukuthi ukuvela okulandelayo kwe-Content Management Systems kufanele kube namandla wokuqukethwe ashukumisayo okuvumela ukwenziwa ngokwezifiso kokuqukethwe isivakashi esisha, isivakashi esibuyayo, amagama angukhiye, umlando wokuthenga, indawo, njll., Njll. Abathengisi kumele baqhubeke bakhulume ngokusobala ngangokunokwenzeka ngqo kuzithameli, futhi lobu buchwepheshe busiyisa phambili.
Tags: adobedesign infographicsumabhebhanaumncintiswano we-facebookizibonelo zomncintiswano we-facebookabalandeli bami beselulabuyiselaukubika
Kungani Ungasebenzisi Iselula?
Ijaji Igama Imibono Ngokombono Wezithameli